Amin’izao an-katoky ny 14 oktobra izao, andro tsy iasana fa andraisan-karama ho fahatsiarovana ny Repoblika 1°, roa volana mialoha ny 11 desambra, andro ahatsiarovana ny nampiharana ny Lalàmpanorenan’ny Repoblika Fahefatra, natao koa andro tsy iasana nefa andraisan-karama, dia hitan’ny SeFaFi miharihary fa tsy misy velively ny finiavana politika, avy amin’ny mpitondra, mba tena hampitombina tokoa an’io Repoblika faha IV io. Efa nolaniana tamin’ny 2010 ny Lalàmpanorena...
Ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana : mbola faniban-javatra hafa indray
Nila fivoriana tsy ara-potoana indroa ny Antenimieram-pirenena, fahefatra sy fahadimy tamin’ity taona ity, vao afaka nandany ny lalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana. Rehefa voafidy ireo lalàna ireo, hoy ny nambara tamintsika, dia mety ho vita amin’ity taona 2014 ity ny fifidianana ny kaomina. Efa voafidy ny lalàna, saingy fahanginana mankarenin-tsofina no manodidina ny fifidianana nampanantenaina, nefa dia io no takian’ny fanajana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-da...
Fifidianana ny kaomina amin'ity taona ity
« Raha te hanao zavatra mahita izay ilaina ; raha tsy te hanao na inona na inona mahita fialan-tsiny ». Ohabolana arabo io ary mahafintina izay mitranga ankehitriny momba ny fifidianana vondrom-bahoakam-paritra eto Madagasikara. Tahaka ireny tafaverina ireny indray ny andron’ny Tetezamita, tamin’izany mantsy dia niavaka mihitsy ny fanemoran-dava ny fitsaran’ny mpifidy izay tena natahorany mafy dia mafy…
Roa taona tsy nanana olom-boafidy ny kaomina
Ny fampiasana ny volam-panjakana araka ny tokony ho izy (Fizarana 3°)
III - Fanaraha-maso ny fitantanam-bola
Lafiny iray manan-danja amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka ny fanaraha-maso ny tetibola miaraka amin'ny fandaniana ny lalàna itantanana ny volam-panjakana. Ny hampisy fahombiazana ny fisahanana an'izany raharaha izany dia tsy maintsy ampahafantarina ny besinimaro araka izay azo atao sy atao mangarahara araka izay azo atao izany. Iray amin'ireo zava-kendren'izao fanambarana izao dia hanazarana ny vahoaka amin'ny pa...
Aorian'ny fifidianana, fametrahana amin'ny toerany ny rafi-panjakana sy fampihavanana
Nambaran’ny Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana (CES) ny 6 fevrie 2014 ny vokatra ofisialin’ny fifidianana solombavambahoaka voalohany ho an’ny Repoblika Fahefatra. Izany dia hitondra any amin’ny fametrahana amin’ny toerany ny Antenimieram-pirenena, ny fanendrena ny Praiminisitra ary ny fananganana ny governemanta. Rehefa tafapetraka amin’ny toerany ny filohan’ny Repoblika dia ny fametrahana amin’ny toerany ireo rafi-panjakana vaovao ireo indray no dingana iray le...
Fifidianana filoha 2013 : tomban'ny fihodinana 1°
Vita iny fihodinana voalohany ho an’ny fifidianana filoha izay natao ny 25 oktobra teo, noho izany tsy maintsy misy tombana atao. Ity tombana ity dia tsy ho toy ny an’ny mpitarika ny fanelanelanana avy amin’ny SADC ka vao niantsona teny Ivato indray andro mialoha ny fifidianana fotsiny dia efa nanana ny heviny maty paika sahady hoe « tsy hisy afaka hangalatra » ; izahay koa dia tsy hindrana ilay fiteny malaza hoe « nahomby tamin’ny ankapobeny » izay nentin’ i Georges Mar...
Raha lany ho Filohan’ny Repoblika ianao
Mpiombona anjara amin’ny fiarahamonim-pirenena ny SeFaFi (Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena) ka mitaky ny hahatonga ny vahoaka ho tena tompom-pahefana marina eto anivon’ny firenena, satria izy no hifidy izay ho mpisolo tena azy, ary ny voalohany indrindra amin’ireny dia ny Filohan’ny Repoblika. Ny olom-boafidy noho izany dia mampihatra ny fahefam-panjakana amin’ny anaran’ny vahoaka ka tsy maintsy mitatitra amin’ny vahoaka izay zava-bitany izy mandritra ny fe-poto...
Maro dia maro ireo nitaky fanavaozana lehibe tamin’ny fifidianana filoha tamin’ny 2001 sy 2006. Anisan’ireny ny SeFaFi. Betsaka tamin’ireny faniriana ireny ankehitriny no tafiditra any anatin’ny lalàm-pifidianana. Saingy, tahaka ny zava-mateti-pitranga eto Madagasikara, dia misy elanelany goavana eo amin’ny lalàna voasoratra sy ny fampiharana azy eo amin’ny asa, ary toa hoe ny manam-pahefana no mampisy an’io elanelany io (mpanao politika, mpanao fanjakana, mpamatsy ara-b...
Tsy mahazo mihemotra intsony
Ny SeFaFi dia nitsipaka tanteraka ny fanapahan-kevitry ny CES (Fitsarana
Manokana momba ny Fifidianana) izay nankatoa ny filatsahan-kofidiana ho
filoham-pirenena tamin’ny 3 mey farany teo, niaraha-nahita izao mantsy fa nisy
ny tsy ara-dalàna. Notakiany àry ny hanadiovana io fivadiham-belirano io
amin’ny alalan’ny fanavaozana ny CES ka mba ho olona mitana ny fianianana
nataony tokoa ny mpikambana ao ary hanaja ny lalàna sy ny Lalàmpanorenana.
Ny 17 aogositra, ny CES vaova...
Raha te ho tafavoaka, atrehina ny zava-misy ary hajaina ny lalàna
Mbola ho taona very indray ho an’ny demokrasia ve ny 2013, ka ny mpanao politika mpanararaotra sy ny mpanondrana entana an-tsokosoko any ivelany no handroaka vola be, ary mandritra izany dia hitohy tsy misy farany ilay tetezamita efa mahatonga an’i Madagasikara ho fanalana hamohamon’izao tontolo izao ? Tsy misy firy intsony ny olom-pirenena mbola manantena ny hisian’ny fifidianana mialohany fotoam-pahavaratra. Izany anefa dia tsy antony tokony hamelana ny fitiavam-bonina...
Ry olom-pirenena, mifohaza, lasa adala ireo !
Ny 21 aogositra 1968, nitsofoka tao Prague ny fiara mifono vy sovietika sy
alemana tao amin’ny Fifaneken’i Varsovia dia nifarana teo ilay « lohataona
demokratika » diso fohy loatra. Izao no nosoratan’ny tanora Tseky teny amin’ny
rindrina : « Lénine, mifohaza ianao, lasa adala ireo ! » I Madagasikara moa,
indrisy, tsy mba manana tsangan’olona mahasolo tena azy hoantsoantsoina ka
noho izany dia any amin’ny olom-pirenena tsirairay avy no miantefa izao antso
Miasa amin’ny maha olona tompon’andraikitra…
Tapi-dalan-kaleha tanteraka i Madagasikara ankehitriny satria fanapahankevitra
tsy voadinika lalina sy tsy mifanaraka amin’ny lalàna no noraisin’ny mpanao
politika izay tsy mihevitra afa-tsy ny tombontsoan’ny tenany manokana nefa
dia izy ireo no natao hiantoka ny tombontsoan’ny firenena. Ilaina ho voafehy tsara
ny olana mipetraka raha tiana ny ho tafavoaka amin’izao toe-draharaha izao.
Teo am-panomanana indrindra ny fifidianana izay efa nandrasana nandritra
Ny CES mpanitsakitsaka lalàna?
Navoakan’ny Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana ny lisitry ny
kandidà 41 hofidiana ho filohan’ny Repoblika dia mivalaketraka sady mitolagaga
Ny SeFaFi aloha dia mampahatsiahy fa io toe-javatra io, na ahoana na
ahoana, dia tsy tokony hanakorontana mihitsy ny tetiandrom-pifidianana izay efa
nananosarotra ery ny nandrafitra azy. Ny fihemorana hafa indray dia
hampidanadana ny varavarana ho an’izao hevitra mivaona amin’ny demokrasia
rehetra izao, amin’ny fotoa...
Na dia efa nirotsaka an-tsehatra indray aza ny FFKM (Filankevitry ny
Fiangonana Kristiana eto Madagasikara) amin’izao an-katoky ny hetsika ho an’ny
fifidianana filoha izao, rehefa avy nantsoina fa tsy nanoina nandritra ny telo
taona, saingy tsy milaza mazava ny tanjona kendreny amin’ny vahoaka,
Na dia efa nankatoavin’ny rafi-panjakana rehetra ao amin’ny Tetezamita
aza ny tetiandrom-pifidianana, ary efa nisy ny nanambara ny firotsahany
Na dia efa nanao izay tra...
Fifidianana hivoahana amin'ny tetezamita : ny sakana tsy maintsy hihoarana
Nahemotra ihany no niafaran’ny fifidianana, noho ny antony ara-teknika
(tratra aoriana ny fanaovana ny lisi-pifidianana), noho ny antony ara-bola (tratra aoriana ny famatsiana ara-bola avy amin’ny fanjakana sy ny mpiara-miombonaantoka ho an’ny fanomanana), ary noho ny antony politika (tratra aoriana ny
famoahana ny lisitry ny mpanao politika mety hahazo famotsoran-keloka, tsy azoantoka ny fiverenan’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto antanindrazana).Tokony hararaot...
Fampianarana ambonu, ny fanambin'ny hoavy
Marary angaha ny fampianarana ambony malagasy ? Ho an’ny ankamaroan’ny olona, ny oniversite dia fiketriketrehana fitokonana fotsiny. Ny 26 novambra farany teo dia fanin-15 izay ny mpiasa ao amin’ny fitantanana sy ny teknika ao amin’ny oniversite-n’Antananarivo no nanomboka fitokonana tsy voafetra : foana ny birao, mihidy ny varavarana, voasakana ny fidirana, eny an-tokotany eny no mitokona am-pilaminana… ary mikatso daholo amin’ny ankapobeny ny asa fampandehanan-draharah...
Niamboho adidy ny mpanao politika
Ny 2012 dia taona tokony ho nivoahana tamin’ny krizy. Ny 15 septambra 2011, ny antoko politika rehetra, afa-tsy ampahany vitsy monja, dia nanao sonia an’ilay Tondro zotra avokoa ary noho izany izy dia nilokaloka koa hanao izay hahafahana manatanteraka fifidianana marina sy mangarahara. Herintaona aty aoriana dia mbola mikatso tanteraka ihany ny raharaha.
Niamboho adidy ny mpanao poiltika teo anivon’ny sampan-draharaha nambara f...
Fanapariaham-pahefana, fanajariana ny tany ary tetezamita
Fandinihana, fakana hevitra, ary angamba koa adihevitra ?, izany izao no atao momba ny fanapariaham-pahefana sy ny fanajariana ny tany. Misy mihitsy aza Lalàna vaovao momba ny fanapariaham-pahefana kononkononina tsimoramora any ho any. Fitondrana heverina ho fampiraisam-pirenena no misahana izany asa izany nefa ny fitsipika ifampitondrana ao dia ny fifandrafesana, ary indrindra koa izy dia fitondrana tetezamita izay tsy nahavita akory nampihatra ilay Lalàmpanorenana nola...
Fianakaviambe iraisampirenena sy vahaolana malagasy samy malagasy
Hatramin’ny niantombohan’ny krizy, tamin’ny 2009, dia misy fiteny miverimberina matetika any amin’ny haino aman-jery, any amin’ny kabary politika, ary eny amin’ny resaka eny an-dalam-be dia ny hoe : ny « Fianakaviambe Iraisampirenena » (CI). Tsy dia tsara loatra amin’ny ankapobeny ny fiheverana azy io ary mampiahiahy fatratra. Koa heverin’ny SeFaFi fa ilaina ny mametraka ny fandraisana anjaran’ny CI ao anatin’ny tena tanjona nokendreny marina, ary miaraka amin’izay koa, ...
Tsy maty manota, famotsoran-keloka, fampihavanana
Tomban’ezaky ny dinik’asan’ny SeFaFi 1
Nisy dinik’asa mikasika an’io lohahevitra io notontosain’ny SeFaFi tany amin’ny tanàn-dehibe maromaro teto Madagasikara : Toamasina (21 jolay 2012), Toliary (4 aogositra), Fianarantsoa (7 septambra), Antananarivo (19 oktobra) ary Antsirabe (26 oktobra). Na taiza na taiza dia samy natevina sy maro karazana ny fandraisana anjara : antoko politika, mpikambana ao amin’ny CT sy ny CST, FFKM, CNOE, Mpiasam-Panjakana ambony, mpandrah...
Mibirioka ny « tetezana » dia hojerem-potsiny ve izany ?
Ny 14 mey 2010, satria ny alarobia no nodidiana ho « tetezana » ny zoma ampitson’ny Fiakarana, dia namoaka filazana ny SeFaFi hoe « Atsahatra ny fibiriokan’ny andro tsy fiasana ». Izao no nambaran’ny fehinteniny tamin’izany : « ny SeFaFi dia manolotra ny sosokevitra amin’ny manam-pahefana mba tsy hamoaka intsony didy peta-toko mamohehatra ho an’ny toekarena toy ireny fa mba hanaja ny fepetra napetraky ny lalàna manan-kery ». Nisy koa olon-tsotra sy mpanao gazety nanao fa...
Ilàna fanavaozana ny Tafika
Ny 26 jiona farany teo dia nankalaza ny faha 52 taona niforonany ny Tafika malagasy. Heverin’ny SeFaFi fa ilaina ny manao jery todika satria manontany tena ny maro, manoloana ny savorovoro misy ankehitriny, raha tena azo itokiana sy mahomby ary misy ilàna azy marina ny tafika ambara ho miasa Ho an’ny Tanindrazana. Satria mantsy isan’andro vaky izao dia ny resaka momba ny tafika foana no mirantiranty eo amin’ny takila voalohan’ny gazety mpiseho isan’andro, ary indraindray...
Raharaha andramena : fanazavana sy tolokevitra
Mbola tsy nisy mihitsy nahabe resaka ohatra an’ity raharaha ity. Ny fanalana ny Minisitry ny Tontolo iainana ary ny Rano sy ny Ala, ny 13 aprily teo, no niafaran’ny tantara mitohy mbola tsy vita mikasika ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny alantsika mba hanondranana bolongan-kazo sarobidy any ivelany, ary ny voalohany amin’ireny dia ny andramena - nanomboka teo moa dia ny Praiministra no misolo toerana azy vonjy maika. Noho izany dia rariny loatra raha afa-po ny SeFaFi re...
Famotsoran-keloka inona, ary hanaovana inona ?
Ny resaka famotsoran-keloka no ifanolanana ka zary fototry ny adilahy politika efa am-bolana maro izao. Samy manana ny heviny raha ny momba azy io, ary na dia ny SeFaFi aza dia sahirana mafy mikaroka lalan-tsaina mampifandray fihevitra samy ara-dalàna nefa tsy mitovy avokan’ny tsirairay. Io resaka io amin’izao fotoana izao no vato misakana ny fivoahana amin’ny krizy amin’ny fomba tony sy maharitra. Mba hampisy indrindra izany fitoniana izany sy mba hampaharitra azy no ...
Ilay taona nanala baraka
Mbola tsy ampy nivoahan’i Madagasikara tamin’ny krizy 2009 ny telo taona feno fitonantonanana sy fitapitaka. Iaraha-mahalala ny antony : ny tetika maizina tsy misy farany ampiasain’ny mpanao politika izay tsy miraharaha afa-tsy ny sezany sy ny tombontsoany, ary tsy mivadika atidoha velively amin’izay hoavin’ny firenena sy ny fahorian’ny mpiray tanindrazana aminy. Raha ny hitondra ny firenena any ami’ny fiadanana sy ny fahombiazana no andras...